people Nepal » आफूलाई आनन्द, अर्कालाई अमिलो : खतिवडा अब अमेरिकाका लागि राजदूत ? आफूलाई आनन्द, अर्कालाई अमिलो : खतिवडा अब अमेरिकाका लागि राजदूत ? – people Nepal
गत शुक्राबार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा ‘यो पटक २ वर्षे अवधि पूरा गरेका कसैलाई पनि नदोहो-याउने, मापदण्ड बनाइयो । त्यो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुनः संसद हुनबाट सदाका लागि पन्छाउने रणनीति बमोजिम आएको थियो । यो समाचार आजको जनआस्थामा प्रकाशित छ ।